Ciidamada Israel ayaa dilay darawal Falastiini ah, dhaawacay xaaskiisa - Wardeeq 24 TV Ciidamada Israel ayaa dilay darawal Falastiini ah, dhaawacay xaaskiisa Wardeeq 24 TV
Home Warar-ka Ciidamada Israel ayaa dilay darawal Falastiini ah, dhaawacay xaaskiisa
Ciidamada Israel ayaa dilay darawal Falastiini ah, dhaawacay xaaskiisa
Askarta Israa’iil ayaa toogasho ku dilay darawal Falastiini ah oo ay sheegeen inuu isku dayay inuu ku jabiyo bar kontorool oo ku taal Daanta Galbeed ee la haysto – xisaab ay ku murmeen xaaskiisa oo la socotay gaariga.
Wasaaradda caafimaadka Falastiiniyiinta ayaa sheegtay in ninkan oo lagu magacaabi jiray Osama Mansuur oo 42 jir ah la dilay Talaadadii, xaaskiisana ay dhaawacyo ka soo gaadheen xabbad. Bayaanka militariga ayaa lagu sheegay inaysan jirin ciidan wax ku noqday dhacdadii aroortii hore.
Weerarada deganayaasha Israa’iil waxay ku sii kordhayaan Falastiiniyiinta
Mareykanka wuxuu u xaqiijinayaa xalka laba dowladood oo ku saabsan Israel iyo Falastiin UN
Wadada nabada ee Israel-Falastiin waxay ku timid gumaysiga
Caawinta qaxootiga Falastiin maahan mid siyaasadeed
“Waxay noo sheegeen inaanu gaariga joojino waana istaagnay oo waan dansanay,” haweeneyda ninkaas oo lagu magacaabo Sumaya Mansour oo 35 jir ah ayaa u sheegtay Falastiin TV.
Ka dib way na soo eegeen waxayna na yidhaahdeen waanu soconaa, gaadhiga waannu shidnay waana dhaqaaqnay dhammaantoodna waxay nagu bilaabeen toogasho. ”
Salem Ciid, duqa tuulada Biddu oo ah halka uu ku nool yahay ninkaasi, ayaa sheegay in Falastiiniyiinta laga yaabo inay dhacdada ka horkeenaan maxkamada caalamiga ee dambiyada, oo dacwad oogeheeda ku dhawaaqay bishii la soo dhaafay inay si rasmi ah u baari doonto dambiyada dagaal ee la sheegay in laga gaystay dhulka Falastiin.
Bayaan ay soo saareen, militariga Israa’iil waxay ku sheegeen in gaariga uu si xawli ah ugu socday koox ka tirsan askarta “qaab khatar galiyay noloshooda”, waxayna ku jawaabeen rasaas “si looga hortago halista”.
Previous articleDood-Abuur: Doorka Wasaaradda Dhalinyarada iyo Ciyaaraha JSL.
Next articleTirada dhimashada ayaa ka kacday dagaalada ka socda Galbeedka Darfur ee Suudaan: UN